*.*.*လင်းကြယ်ဖြူ*.*.*: ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက် များနဲ့ ဧကံဖြိုး
နေရာ က ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် လှိုင် နယ်မြေထဲ မှာ
အဖြစ် အပျက် က သုံးပွင့်ဆိုင် ရင်ခုန်မှတ်တမ်း
သူတို့တတွေက ရဲရင့် .... ပြီးတော့ လှိုင်း ...နောက်တစ်ယောက် က မိုးခင်ခင်
အဲ့ဒီ့ သုံးဦး စလုံးရဲ့ ရင်ခုံသံတွေ ဟာ ခပ်ပြင်းပြင်းတွေ ဖြစ် လာတဲ့ အခါ ..............................
ကိုယ်စီ ကိုယ်ငှ တို့ ရဲ့ " ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်" ... တကယ့် ကို "ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်" တွေ ဖြစ်လာ ခဲ့ပါတော့ တယ်....။ ။
အဲ့ ဒီ သုံးပွင့်ဆိုင် ရသစုံ အချစ် ဇာတ်လမ်းလေးကို နှသုံးသား နဲ့ ထွင်း အသက်သွင်းရင်း ဇာတ်လမ်း လေး ဆင် လို့ ခံစား ပုံဖော်ပေးလိုက် သူ က ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ ကြီး " ဧကံဖြိုး"
သူက ဟန်သစ်မဂ္ဂဇင်း၊ ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်း၊ မြှားနတ်မောင်မဂ္ဂဇင်း၊ ကြော်ငြာမဂ္ဂဇင်းတွေမှာ၁၉၉၀ မှ ၁၉၉၅ အထိပါဝင် ရေးသားခဲ့ တဲ့ ကလောင်ရှင် ....ပြီးတော့ ......."ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်" တို့ရဲ့ သခင် ....
သူက အခုထုတ်ဝေမယ့် ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက် ကို ပထမအကြိမ်အဖြစ် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ အင်ကြင်းမြိုင်စာပေ ကနေ အချစ်ရှိသောနေ့ စွဲများ အမည် နဲ့ ထုတ်ဝေခဲ့ တယ်.. မကြာခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ လက်ရာမွန် ကို ဒါရိုက်တာ မောင်မျိူးမင်း ( ရင်တွင်းဖြစ်) က နှစ်သက်ခုံမင်လို့ အဲ့ဒီ့နာမည်နဲ့ပဲ ဇာတ်ကောင်များဖြစ်တဲ့ ဒွေး၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်၊ ခင်ဇာခြည်ကျော် တို့ နဲ့ ဗီဒီယိုဇတ်ကား ရိုက်ကူးခဲ့လို့ နာမည် ကျော်ကြား လူကြိုက်များခဲ့ ပြန်ပါတယ်......
ဒါရိုက်တာမောင်မျိူးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်)ကပဲ အဲ့ဒီ့ဝတ္တုဇတ်လမ်းကို ထပ်ဝယ်ပြီး ဒုတိယ အကြိမ် DVD ဇတ်ကားကြီးအဖြစ် နဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ မိုးဟေကို၊ သင်ဇာဝင့်ကျာ် တို့ကိုပါဝင်စေကာ ၂၀၁၀ခုနှစ် မှာ " အမုန်းသမိုင်း" အမည်နဲ့ တခေတ်ဆန်းစေခဲ့ပြန်ပါတယ်...
ယခုတစ်ဖန် စာရေးဆရာ ဧကံဖြိုး က သူ၏ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ဖြစ်သောထိုဝတ္တုကိုယနေ့ခေတ်ကာလနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်စေဖို့ ၀တ္တကိုအစကနေ အဆုံး ပြန်လည်ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ကာ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေတင်ဆက်ဦးမှာဖြစ်ပါ တယ်...
ဇာတ်ကွက် လှလှ ..အချစ်ရသ ရွှန်းရွှန်းဝေေ၀ နဲ့ ဖတ်ရသူတိုင်း ရင်ထဲ စိမ့်နေအောင် စွဲဆောင်စေမှာသေချာတဲ့ "ဧကံဖြိုး" ရဲ့ "ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်" ၀တ္ထုရှည်ကာင်း တစ်ပုဒ်ဟာ မကြာခင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ဖဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဝေေ တာ့မှာဖြစ် လို့ အခုလာမယ့် ချစ်သူများနေ့မှာ မိမိရဲ့ခုံမင်ရသူ တစ်ဦးဦးကို လက်ဆောင်အဖြစ် စေပါးသေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အင်မတန်မှ ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးလေးပါပဲ လို့ သူ့ရဲ့စာမူကို ခံစားမျှဝေ ဖော်ညွှန်းပေးလိုက် ပါရစေ ခင်ဗျာ..... ။ ။
( စာမရေးတာကြာပေမယ့် ကိုယ့်မိတ်ဆွေ ကြီးအတွက် မအားတဲ့ကြားကနေ အခုလို ပံ့ပိုးကူညီခွင့်ရတာ ကို ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ဆက်လက်အောင်မြင်ပါစေ ဘော်ဒါကြီး ဧကံဖြိုး (ခ) KYP ရေ ...ကျွန်တော်ကတော့ ပျောက်နေပါဦးမယ်)
ရေးသူ လင်းကြယ်ဖြူ အချိန် 7:23:00 PM
ဆရာကြယ်ကတော့ ကြော်ငြာထိုးပြီး ထွက်ပြေးသွားပြန်ပါပြီ။ တကယ်ဘဲ။ သူ့တစ်ယောက်ထဲ မအားတာကျနေတာဘဲ။ နဲနဲပါးပါးတော့ ရေးဦမှပေါ့။းဝ)
ဆရာကြယ်တို့က မအားတာ မအားရမယ် ဖေ့ဘွတ်မှာတော့ သူ့ခြေရာတွေကြီးဘဲ။
စာလေး ဘာလေး ရေးပါဦး။
ဒီစာအုပ် ရန်ကုန်ရောက်ရင် ၀ယ်ခဲ့မယ် ဆရာကြယ်ညွှန်းလို့ စိတ်ဝင်စားသွားပြီး)
It's awesome to payaquick visit this site and reading thhe views of all mates regarding
Heree is my homepage ... Ask.fm hack
*** သင့်စကားချိုချို တို့၏ က္ဂန်းခိုရာ ***
Sometimes we must be hurt in order to grow.....
We must loose in order to gain ....
Because some lessons are best learned through pain....
Watch your thoughts, it will become words...
Watch your words,it will become actions...
Watch your actions , it will become habits..
Watch your habits, it will become characters...
Watch your Character , it will become destiny !!!!!!!
... အိမ်ထဲမှာ ...
... အမှတ်တရ ...
Tag Posts (9)
... ဒီကနေ လာလည်ကြတာ...
***** အိမ်နီးနားချင်း ရောင်းရင်းတစ်တ္ဂေ *****
ကိုဝင်းဇော် ရဲ့ Welcome
စတေသိကျပိုငျး၊ အဘိဓမ်မာသငျတနျး၊ တတိယအဖှဲ့ခှဲ -
Windows Movie Maker 2021 Full Version (Fix) - ကြှနျတျောတို့မွနျမာနိုငျငံမှာ ဟိုတုနျးက Computer အခွခေံသငျတနျး (Windows 95 or something Course) တို့ဘာတို့ သငျကွတဲ့အခါ ခုတငျပေးထားတဲ့ Windows Movie Maker...
ကိုကိုမောင် ရဲ့ ပန်းရနံ့
မငုံရဲ့ ကန္တာရမိုးစက်များ
မေ ၁၃ ရဲ့အားမာန်
Télécharger Les Gardiens des Éléments tome 1 : La Maîtresse du Vent PDF Rachel Caine - Les Gardiens des Éléments tome 1 : La Maîtresse du Vent De *Rachel Caine * ------------------------------ [image: Book's Cover ofLes Gardiens des Éléments ...
Free Download: Escape the Virus: A Post-Apocalyptic Survival Thriller (Last Pandemic Book 1) by Ryan Westfield PDF - Read or Download Escape the Virus: A Post-Apocalyptic Survival Thriller (Last Pandemic Book 1) Book by Ryan Westfield. It is one of the best seller books...
မျဉ်းပြိုင်များ - မာနတွေ ခ၀ါချဖို့ တို့တွေ မာန်မလျှော့ခဲ့ကြဘူး.. သူ့ထက်ငါ တင်းနိုင်လို့ ဂုဏ်ယူနေခဲ့ကြတယ်....။ အချိန်ဆိုတာ အကန့်သတ်ရှိမှန်း မေ့နေခဲ့တဲ့အခိုက် အလိုက်သင့်လေး...
မသိင်္ဂါကျော် ရဲ့ နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း
ကိုစည်သူ ရဲ့ ပေါက်ကရအတွေးအပိုင်းအစများ
ပါရာစီတမော - (((((တွမ်))))) ဟန်းဟန်း ဟိုက် ဘယ်ကိုရောက်လာပါလိမ့် ဟေးး ကို အဲခရော့ အမ်းး မှားလို့ ၆နှစ်လောက် ပျောက်သွားတာ ခုလမ်းမှားလာတာလား? မဟုတ်ပါဘူး။ ညီကိုမောင်နှမတွေကိ...
မမေဇင် ရဲ့ ရေးချင်တာလေးတွေ
Holiday Movie Streaming @#$# - @#$# Holiday Free Full Movie Online [image: $#@Watch Holiday Movie Streaming] Free Watch Holiday Thriller, Action, Romance, Streaming Online Runtime 170 min...
နန်း ရဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
မကြည်ဖြူပိုင် ရဲ့ နွေဦးမိုး
- " ဒန္တီ ဝေဒနာ'' အညံ့လို့ပြောပြော ခိုက်တယ်လို့ ဆိုဆို သောကြာ သား မဟုတ်တဲ့ဒီ ကောင် ဒုက္ခပေးချက် ပါးနှစ်ဖက်စလုံးရောင်ူဟိုး အဆုံးထိ ကိုက်ချက် နာချက် အကြိတ် တောင...
For Android 4.1 myanmar fornt - Root for Android 4.1 , Busy box, Super SU, Click here to download
ရွှန်းမီ ရဲ့ ..စုံစီနဖာ စာမျက်နှာ
ကိုရန်ကုန်သား ရဲ့ ရင်ခွင်တစ်ခု ဖန်ဆင်းခြင်း
- *" နောက်ကြောင်းပြန်ကြသူများသို့ ... " * ဒီဘ၀မှာ Back Gear မပါဘူး... ကိုယ်မြင်သမျှ"ရှေ့သို့ "ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွေ့ချည်း... အကြိမ်ကြိမ်ရှုံးနိမ့်မှုတွေ...
ကိုမောင်ကွတ် ရဲ့ my kitchen , my life
ကျွန်တော့ အတွေ့အကြုံများ ၄ - ဧည့်သည်ဟာ ဆိုင် သို့ ဟိုတယ်မှာ စားသောက်ဖို့ရောက်တာနဲ့ ပထမဦးဆုံး ဆိုင်ရဲ့ အပြင်အဆင် ၊ ဟိုတယ်ရဲ့ အခင်းအကျင်း ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိ ပသာဒ ဖြစ်စေမဲ့...
ကို ညီညီ ပြည် ...ပျူမြို့မှာ ထွက်ကျသူ
တစ်ဆောင်းသစ်ပြန်ပြီ - Share| ဖွင့်စရာတံခါးမရှိလို့ ငါ့တံခါးမှာ နှင်းတွေလာရိုက်ခတ်သလားဆိုတာ ပြောစရာစကားမရှိဘူး။ လောကကြီးစကားမပြောတတ်လို့ထိုင်မငိုဘူးဆိုတဲ့အဆိုတော်နဲ့ဒီနေရာမှာနည...
~ Larva ~ -
လတ်လတ်ဇော် ၏ ကျွန်တော်တို့အိမ်
အလှည့်စောင့်သူများ - လရောင်ဖြန်းရင် လရောင်ဆန်းဘို့ ညကြီးသန်းကောင် အနက်ရောင်ချူံ အပြင်ထွက် နေရောဖြန်းရင် နေရောင်ဆန်းဘို့ နေ့ခင်းကြောင်တောင် အဖြူရောင်ဆောင်ပြီးအပြင်ထွက် မင်း ...
ကိုရေတမာ ရဲ့လူအ အိပ်မက်
နင်မရှိတဲ့ ငါ - နားလည်မှုတွေ တနင့်တပိုး ထမ်းထားရတဲ့ ငါ့ကို နည်းသေးတယ် ထင်သေးလို့ နင်းချေရက်တဲ့ နင့်အတ္တကို နင့်ကို နင်ရော သိရဲ့လား။ နည်းနည်းနောနောမှ မဟုတ်ခဲ့တာ နာရီပေါင်းများ...
..ဟယ်....ဟယ်....ဟယ်တော့... - လက်သရမ်းဖို့အချိန်တန် အိမ်မပြန်ခင် ကဗျာစပ် ကာရံတွေထပ်ပြန်တော့ အသစ်တစ်ဖန် အကြံမှာ နဘေတွေကပ်ရအောင် လက်ကွက်ခလုတ်မှာ လက်ကိုထပ် ဟယ်တော့............... မီးပြတ်သွား...
ငှက်တစ်ဖြစ်လဲ..၀က်တစ်ဖြစ်လဲ..စက်တင်ဘာ ၏ ကောင်းကင်
ရဲလေး သီချင်းများ - ...
Friend MuhTarom's cool stuffs
Bubble Drink - Long time back before softdrink & other carbonation drink invented, water was remaining only tasteless, plain and boring liquid. If we’re still drink the w...
မောင်ဝေယံ ရဲ့ မင်းအတွက်
ဖြူ ရဲ့ အရောင်မဲ့စိတ်ခံစားချက်များ
3rd day in Syd - အဟား.... ဒီနေ့ တော့ အော်စီရဲ့အထင်ကရနေရာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Opera House ရယ် Bondi Beach လေးရယ် သွားလည်ဖြစ်ပါတယ်.... ရင်ထဲမှာ အရမ်းပျော်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်.... ...
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတည်ထောင်ကြမယ် --- လက်လီအရောင်းဆိုင်တွေ ဖွင့်ကြမယ် --- (၂) - ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးမထူထောင်ဖြစ်တဲ့ အခြေခံအကြောင်းတရား (၄) ချက် လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များအရ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိကြပေမယ့်လည်း လက်တွေ့မှာ ...
လွတ်လပ်ရေး ဖခင် - (ဖေဖေါ်ဝါရီဆယ့်သုံးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါ။ တထောင့်ကိုးရာတဆယ့်ငါး၊ ရှေ့နေဦးဖာ သား။ ဇာတိနတ်မောက် မကွေးခရိုင်၊ သိကြများခုတိုင်။ ကြံ့ကြံ့ခိုင်တဲ့ဇာနည်ဖွား၊ မိခင...
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု အတတ်ပညာ - စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုဟု ဆိုလိုက်သဖြင့် စကားကြီးစကားကျယ် ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကို နေရာတိုင်း လုပ်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနီ...
ညီမ ကြယ်ဖြူစင် ရဲ့ ခံစားမှုစာစုများ
နည်းနည်းလေးတော့ လွဲနေတယ် - အင်း စာမရေးတာကြာတော့ ဘယ်ကနေ စရေးရမှန်းတောင် မသိချင်တော့ဘူး။ ပါးလုံးနော်ဝေ ရောက်စ အတွေ့အကြုံ လမ်းခရီး အတွေ့အကြုံ၊ အခုထိကြုံလို့ မပြီးသေးတာလေးတွေ ရေးဦးမှပဲ ...
၅ + ၁ = ၆
ခံစားမှုတွေအများကြီးခံစားရတဲ့Video လေးတခု - ဒီနေ့ကျနော် e-mail ထဲကိုရောက်လာတဲ့ FWD mail လေးတခုအကြောင်းပြောပြချင် လို့ပါ..။ ဒီပြကွက်လေးကိုကြည့်ပြီး ကျနော်တို့ ၆ယောက်လုံးခံစားချက်တွေထပ်တူထပ်မျှ ခံစားခဲ့...
မဇွန် ရဲ့ အမှတ်တမဲ့မှ အမှတ်တရ နေ့ရက်များသို့
ဇူး ရဲ့ ရင်မှ မိုးစက်ပွင့်များ
မချစ်ရ ၏ အကြောင်းအရာများ
အရုပ်ကလေး ၏ ငြိမ်သက်ခြင်း အတွေးပန်းချီ
ပန် မြတ် သွင်
မကေ ရဲ့ Note Book
မြန်မာဖ္ဂား ၏ ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု
မရောင် ၏ နှင်းဆီဖြူရဲ့ ကဗျာပန်းခင်း
ကိုရဲ ရဲ့ လေလွင့်သူတစ်ယောက်ရဲ့  ရောက်တတ်ရာရာ အတွေးများ .....
HTML ကနေ PDF ပြောင်းချင်ရင်
လင်းကြယ်ဖြူ by www.lkphyu.blogspot.com
ဖြူစင်သော ကြယ်စင်လေးတစ်ခုဟာ ကမ္ဘာမြေအား အမှောင်ခွင်း " ည "၏ အလင်းဆောင် ကြယ်များထဲမှ အမှိန်ဆုံး တစ်ပွင့်သာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေပါစေ.. လင်းသင့်သလောက်ကလေးတော့ မကြွေခင်မှာ တတ်နိုင်သမျှ လင်းနေမှာပါပဲ..... လင်းကြယ်ဖြူ